'मेक्स्ट' अर्थात जापानमा नि:शुल्क अध्ययन: पुरा पढ्न लिंक्मा क्लिक गर्नुहोस् - Nayapul Online
काठमाण्डौँ – जापान सरकरले हरेक बर्ष प्रदान गर्ने मेक्स्ट छात्रबृत्ति 文部科学省 Monbukagakusho (Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology (MEXT) के हो भन्ने विषयमा केही समय पहिले नै हामीले चर्चा गरिसकेका छौं । पढ्न छुटाउनुभएको भए यहाँ क्लिक गरि पढ्न सक्नुहुन्छ ।
मेक्स्टले ७ प्रकारका छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ । आजको लेखमा नेपालीहरुले कसरी यसमा आवेदन दिन सक्छन् भन्ने बारे केहीअनुभव र सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
आगामी वर्षको अप्रिलका लागि मेक्स्ट छात्रवृत्तिका लागि आवेदन प्रकृया अघिल्लो वर्षको मे मा शुरु हुन्छ । अक्टोबरको पढाइलाई पनि उहि प्रकृया लागू हुन्छ । आफू कुन सत्रमा पढ्ने हो सोको छनौट गरेर आवेदन दिनुपर्छ । आवेदन खुलाभएको सूचना जापानी दूतावासको वेवसाइटमा पाइन्छ । यसबाट छात्रवृत्ति फाराम डाउनलोड गर्न पनि सकिन्छ । फाराममा व्यक्तिगत, शैक्षिक र व्यावसायिक जानकारी भर्नुपर्ने हुन्छ । यसकालागि १६ वर्षको शिक्षा पुरा गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै कुनै व्यावसायिक अनुभव छ भने त्यसलाई पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । आवेदनसँगै पढाइको क्षेत्रसम्बन्धी विवरण पनि भर्नुपर्छ । यसमा तपाइले पढेको विषय र जापानमा पढ्न चाहेको विषयबारे जानकारी दिनपर्छ । त्यस्तै यसमा रिकमेनेण्डेशन लेटर पनि भर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा शैक्षिक व्यक्तिको सिफरिश पत्र हुन्छ जसलाई युनिभर्सिटिको खाममा बन्दगरिएको हुनुपर्छ । यदि तपाइ जागिरे हो भने व्यावसायिक व्यक्तिको सिफारिश पत्र पनि समावेश हुनुपर्छ । यति गरेपछि फाराम पुरा हुन्छ । त्यसपछि आफ्ना ट्रान्सक्रिप्ट र व्यक्तिगत र क्यारेक्टर प्रमाणपत्र लगायतका दस्तावेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दस्तावेजका फोटोकपि पेश गरे हुन्छ । यससँगै नेपाल ीनागरिकताको प्रमाणपत्र, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो पनि आवेदन फारामसँगै बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि जापानी दूतावासले तोकेको ५ दिनको समयभित्र ९ः३० देखि १२ः ३० बजेसम्म जापानी दूतावास गएर यी सबै विवरण बुझाउनुपर्छ । आवेदन बुझाउने अन्तिम दिन कुर्नु हुँदैन । समयको अभावका कारण त्यतिबेला बुझाइएको विवरण अस्विकृत पनि हुनसक्छ ।
सबै विवरण बुझाइसकेपछि ती सबैको मूल्यांकन हुन्जेलसम्म कुर्नुपर्छ । यसमा एक महीना वा सोभन्दा बढीको समय पनिलाग्न सक्छ । त्यसपछिदूतावासले को–को फष्र्ट स्क्रिनिंगका लागि पास भए भन्ने कुराको परिणाम निकाल्छन् । जुनको अन्त्यसम्ममा यो परिणाम निस्कन्छ । आवश्यक कागजपत्र सबै बुझाएपछि उनीहरुले एक स्लिप तपाइलाई दिन्छन् जसमा एक सिरियल नम्बर अथवा आवेदन नम्बर हुन्छ । यो स्लिप आफूसँग सुरक्षित राख्नुपर्छ । उनीहरुले फोन गरेर वा व्यक्तिगत रुपमा परिणाम सार्वजनिक गर्दैनन् । त्यसैले धैयर्तापूर्वक वेवसाइट चेक गरिराख्नुपर्छ । यो पास गरिसकेपछि भने दूतावासमा सम्पर्क गरेर अगाडिका प्रकृयाहरु बुझ्न सकिन्छ ।
फस्र्ट स्क्रिनिंग पास गरिसकेपछि एकचोटी फेरी दूतावासमा जानुपर्छ । यो पटक भने रिसर्च प्रोपोजल पुरा गर्न दूतावास जानुपर्छ । यसमाद तयारी समय धेरै नहुने भएकाले अगाडि देखि नै तयार रहनु राम्रो हुन्छ । यससँगै तपाइले एब्स्ट्रयाक्ट वा रिसर्चको समिक्षा पनि बुझाउनुपर्छ । यी सबै बुझाइसकेपछि तपाइलई एण्ट्रि कार्ड दिइन्छ र अर्को परिक्षा र भाषा परिक्षाको मिति पनि जानकारी गराइन्छ ।
टोेफेल र आइएलटीएस जस्ता भाषा परिक्षा दिइसकेकाहरुले पनि भाषा परिक्षा दिनुपर्छ । रिसर्च विद्यार्थीले जापानी र अंग्रेजीभाषा दुवै परिक्षामा उपस्थित हुनुपर्छ । दुवै परिक्षा छुट्टा छुट्टै लिइन्छ ।
भाषा परिक्षा पास भएपछि अन्तर्वार्ताको पालो आउँछ । दूतावाले अन्तर्वार्ताको मितिबारे जानकारी दिन्छ । यसमातपाई समयमै पुग्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्वार्ता ४ देखि बढी व्यक्तिले लिन्छन् । यसमा तपाइकाृ पारिवारिक पृष्ठभूमि, रुचिका विषय भविष्यका योजना लगायतका प्रश्नहरु सोधिन्छ ।
– किन जापान जान चाहानुहुन्छ ?
– जापानका बारेमा के थाहा छ?
– यो छात्रवृत्तिबारे कसले जानकारी दियो?
– तपाइले गरेका अनसन्धानले जापान वा नेपाललाई कसरी सहयोग हुन्छ?
– रिसर्च कसरी गर्नुहुन्छ?
– यो विषय किन छान्नुभएको ?
– यसपछिका योजना के छ ? आदि
– औपचारिक बन्ने
– समयनिष्ठ बन्ने
– स्मार्ट बन्ने
प्रिलिमिनरी स्क्रिनिंग पास भएको सूचना
अन्तर्वार्ता भएको झण्डै एक महिनापछि दूतावासले प्रिलिमिनरी स्क्रिनिंग पास भएको भए यसबारे जानकारी दिन्छ । यहाँबाट छात्रवृत्तिपाउने सम्भावना ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत रहन्छ । तैपनि यसमा अझै प्रकृयाहरु बाँकी छन् । युनिभर्सिटिको प्राध्यापकको स्विकृत पत्र प्राप्त गर्नु यस प्रकृयाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । दूतावासको फम्र्याट प्राप्त भइसकेपछि स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ र यसलाई दूतावासमा बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि लेटर अफ एक्सेप्टेन्स (एलओए) हासिलगर्ने प्रकृयाको शुरुआत गर्नुपर्छ ।
दूतावासको स्क्रिनिंग पास गरिसकेपछि स्क्रिनिंग पास भएको प्रमाणपत्र दिइन्छ । त्यसपछि जापानका प्राध्यापकहरुबाट कम्तिमा पनि एकओटा एलओए प्राप्तगर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । आफ्ना सबै दस्तावेज स्क्यान गरेर मेलमा प्राध्यापकलाई पठाउनुपर्छ । यसमा दूतावासको स्क्रिनिङ पास भएको जानकारी र उनको निरिक्षणमा रिसर्च गर्न चाहेको कुरा पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । यदि उनी सकारात्मक बने भने एलओए फारामका लागि अनुरोध गर्र्नुपर्छ, जुन दूतावासले उपलब्ध गराउँछ ।
राम्रा विश्वविद्यालय खोज्न पक्कै पनि सबै चाहन्छन् । तर राम्रा र प्रमुख विश्लविद्यालयका प्राध्यापकहरु व्यस्त हुने भएकाले अरुलाई पनि विकल्पमा राख्नुपर्छ ।
प्राध्यापकको खोजी गर्दा युनिभर्सिटिको वेवसाइटमा जान सकिन्छ । यस्तोमा अनुभवि र अंग्रेजीजान्ने खोजीगर्दा राम्रो हुन्छ ।
प्राध्यापकलाई मेल पठाउँदा सधैं नम्र र औपचारिक हुनुपर्छ । अभद्र रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु हुँदैन । जापानीहरु छोटो र मिठो शब्द मन पराउँछन् ।
एक्सेप्टेन्स लेटरको पर्खाइ
दूतावासमा निश्चित समयभित्र बुझाइसक्नुपर्ने भएकाले कम्तिमा पनि एक एलओए प्राप्त गर्नु उत्साहित नै हुन्छ । यो बुझाउने अन्तिम मिति सेप्टेम्बरको दोस्रो हप्तातिर हुने भएकाले अलि छिटै बुझाउनु पर्छ । यो लेटर पाइसकेपछि यसलाई दूतावासमा लगेर बुझाउनु पर्छ र यो सँगै युनिभर्सिटि प्रिफरेन्स फर्म पनि बुझाउनुपर्छ । यस्तो चाहिँ एकभन्दा बढी प्रांध्यापकबाट एलओए पाएको अवस्थामा प्राथमिकताका आधारमा उनीहरुलाई वर्गिकरण गर्नुपर्दा गरिन्छ ।
यो पत्र बुझाइसकेपछि २ महीना जतिको समय पर्खिनुपर्छ ।
यो पाइसकेपछि अब पालो हो अध्यागमन प्रकृयाको ।
यसका लागि आवश्यक तयारी कसरी गर्ने भन्ने बारे दूतावासले नै तपाइलाई मार्गनिर्देशन गर्छ । त्यसपछि भिसाका लागि भिसा फाराम र आवेदन फर्मसँगै दूतावासमा बुझाउनुपर्छ ।
छात्रवृत्तिको नियम अनुसार मेक्स्टले जापान आउने टिकट पनि खरिद गरिदिन्छ । यससँगै दूतावासले जापानी युनिभर्सिटि अलुम्नी एसोशियन नेपाल (जेयूएएएन) सँगको सहकार्यमा एक ओरियण्टेशन कार्यक्रमको पनि आयोजना गर्छ ।
भिसा आवेदनसँगै विश्वविद्यालयको प्रकृया पनि एकसाथ पुरा गर्नुपर्छ । यसमा प्राध्यापक, ग्रयाजुयटट स्कूल, विभाग वा अन्य कुनै अन्तरराष्ट्रिय संगठनले सहयोग गर्छ ।
थप जानकारीका लागि यि दुई वेवसाइटहरु सहयोगी हुन सक्छन् ।
( मेक्स्ट छात्रबृत्तिमा टोकियो विश्वविद्यालयमा अध्धयन गरिरहेका जय नेपालको अनुभवमा आधारित सामाग्री )